Q स्याडोमासोचिज्म भनेको के हो ?
स्याडोमासोचिज्मले सामान्यतया: यौन उत्पीडन वा दुखाइ वा अपमानको गरेर आनन्द दिने र/ वा प्राप्त गर्नेलाई जनाउँदछ । व्यक्तिले यी कार्यहरूबाट यौन आनन्द लिन खोज्दछ ।
Q सोसियल फोबिया वा सामाजिक डर भन्नाले तपाईं के बुझ्नुहुन्छ ? यसलाई कसरी व्यक्त गरिन्छ ?
सामाजिक फोबिया भनेको अरूले के सोच्लान् र लाजमान्ने एउटा बलियो डर हो । यो डर यति धेरै बलियो हुन सक्छ कि मानिसहरु अरु मानिसहरुको अगाडि आफूले गर्ने कामको बारेमा एक हप्ता अघि नै चिन्ता गर्न शुरु गर्दछ, वा त्यसले उनलाई सार्वजनिक स्थान / विद्यालय / कार्य आदिमा सीमित गर्न सक्दछ । मानिसहरुको धेरै डरलाग्दो डर हुनेछ कि अरूले उसलाई नराम्रो ठान्लान् वा मजाक बनाउलान् भन्ने सोच्नुहुन्छ । उसलाई अरूको अगाडि खान वा पिउन डर लाग्न सक्छ, सार्वजनिक बाहिरका शौचालयहरु प्रयोग गर्न, सामाजिक क्रियाकलापमा जान, भिडको अगाडि केहि पनि काम गर्न डर लाग्ने हुन सक्दछ । यो यस्तो अवस्थाहरुबाट वा पूर्णतया तिनीहरूबाट टाढा रहेर बन्द हुन सक्दछ । केहिको लागि, यो केवल केहि परिस्थितिहरूमा मात्रै समस्या हो, तर केहिको लागि यो डर लगातार भइ रहन सक्छ । यो डर अरूलाई स्वीकार गर्न कठिनाई हुने रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ, अन्य मान्छेहरुसँग कुरा गरेर, सार्वजनिक रूपमा स्व-चेतनाको बारेमा उच्च स्तरको कुरा गरेर, कुनै पनि सामाजिक कार्यको हप्ता दिन वा केही दिन अगाडि धेरै चिन्ता लाग्न सक्छ, साथी बनाउन र अरुहरु सँग मित्रता कायम गर्न कठिनाइहरु भएर चिन्ता लाग्न सक्दछ, डरको शारीरिक लक्षण पसीना आउने, काम्ने, लाज लाग्ने, धड्कन बढ्ने, वाकवाक लाग्ने आदि जस्तो देखिन्छ । ।
Q मानिसहरू किन रोगसम्बन्धी झूटो बोल्छन् ?
मानिसहरू रोगसम्बन्धि झूटो बोल्ने धेरै कारणहरु छन् । यो पारिवारिक दुर्व्यवहारबाट हुन सक्छ (तिनीहरुले पिटाइन नखाउन भनेर ढाकछोप गर्ने वा झूटो बोल्ने) । यो अपरिपक्व हुन सक्छ ( सामान्यतया संसारदेखि डराएको) वा यो व्यक्तिले तिनीहरु जीवनको भर्याङमा उच्च तहको सींढीमा छु भनेर नबुझ्दा सजिलै हुने गर्दछ, र तिनीहरु आफूलाई अरूभन्दा राम्रो देखाउनको लागि कथाहरु बनाउँछन् वा वा तिनीहरू आफूले नपाएको सहानुभूति वा ध्यान चाहेकोले यस्तो गर्छन् । त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् ।
Q मेरो धड्कन के कारण बढ्दछ र म तियसबाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छु ?
धड्कन बढ्ने कारणहरू निम्न प्रकारका छन् - चिन्ता, डर, वा तनाव जस्ता बलिया भावनाहरू; धड्कनहरू प्राय: आतंकित हमलाहरू हुदाँ हुन्छन् । क्याफिन, निकोटीन, रक्सी, वा कोकिन जस्तै गैरकानूनी सडक ड्रगहरू; केहि चिकित्सा अवस्थाहरु, थाइराइड रोग, कम रक्त चिनीको स्तर, एनीमिया, कम रक्तचाप, ज्वरो र निर्जलीकरण सहित; रजस्वला, गर्भावस्था वा रजोनिवृत्तिसँग सम्बधित हार्मोनका परिवर्तनहरु । प्रायजसो: अवस्थाहरुमा, धड्कनहरू हानिकारक हुने पाइन्छन् र प्रायः तिनीहरु आफैं ठीक भएर जान्छन् । उपचार तपाईंको धड्कनको कारणमा निर्भर गर्दछ । केही जीवनशैली जस्तै अभ्यास र योग र धूम्रपान र रक्सी छोड्दा यसलाई धेरै सहयोग पुग्दछ ।